I-Dibenzylidene Sorbitol ngaphaya kweArhente yeNyukliya
ngomphathi ku 20-11-18
I-Dibenzylidene sorbitol Agent yenyukliya engafaniyo inokwahlulahlulwa ibe ziindidi ezintathu. Isizukulwana sokuqala yi-DBS. Le mveliso ineqondo elisezantsi lokungena kunye nokunambitheka okuqinileyo kwealdehyde. Okwangoku, ngenxa yokunyibilika kwayo ...
Yintoni uMmeli weNyukliya ocacileyo
Izinto eziqhelekileyo ezibonakalayo ze-nucleating agents zingahlulwa zibe ziindidi ezimbini: iikhompawundi eziphilayo kunye nezinto ezingaqhelekanga. Izinto ezingafunekiyo zenyukliya zii-oxides zesinyithi, ezinje nge talc, silica, titanium dioxide, benzoic acid, njalo njalo ....
Ngenxa yokuphakama kobushushu bayo obuphezulu, ukukhanya komxhuzulane, ukusebenziseka ngokulula kunye nokubumba, ukurisayikilisheka ngokulula, kunye nexabiso eliphantsi, i-polypropylene isetyenziswe ngokubanzi kwimizi-mveliso yamachiza, ifayibha yemichiza, isixhobo sasekhaya, ukupakisha, ishishini lokukhanya kunye namanye amashishini. Njani ...
Ukunciphisa i-Haze kunye nokuPhucula ukuBonakala kwePolypropylene
ngomphathi ku 20-09-18
Ukucacisa i-Agent inokusetyenziselwa ukunciphisa i-haze kunye nokunyusa ukucaca kwe-polypropylene ngokusebenzisa i-nucleation yepolymer. Oku kukhokelela kukomelela okuphuculweyo kwenxalenye ebunjiweyo kunye nexesha elifutshane lokujikeleza ngexesha lenkqubo yokubumba ....
Sikulindile eShenzhen 2021!
I-Chinaplas yenye yezona zinto zibalaseleyo kwihlabathi zerabha kunye nezinto zeplastiki ezingaxabisekanga kakhulu kubo bonke abatyeleli kunye nomboniso apho. Kunyaka ophelileyo, ngexesha lomboniso, wonke umntu uhlala enomdla kakhulu ...